राजनीति विशेष – Page2– Halkaro
देउवाको चौथो सत्तारोहण
प्रकाशित मिति : २०७४, २३ जेष्ठ मंगलवार June 8, 2017
काठमाडौँ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा तथा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारको समर्थनमा उनी संसदबाट चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । शेरबहादुर देउवा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको समेत नेतृत्व गर्दै वि.सं. २०५२ सालमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका […]
तथ्यांकमा यस्तो छ दोस्रो चरणको निर्वाचन
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ जेष्ठ सोमबार June 16, 2017
काठमाडौँ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन सात वितिसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन भएका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमध्ये २८२ स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालिसकेका छन् । भरतपुर महानगरमा विवादका कारण मतगणना स्थगित भएको छ भने निर्वाचन अायोगले वडा नं. १९ मा पुन मतदानको निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन […]
छोटो अायुको सरकारमा को बन्ला गृहमन्त्री ? गच्छदारले गृह मन्त्रालय पाउलान त ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २० बैशाख बुधबार May 4, 2017
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले राजिनामा दिइसकेका छन् । निर्वाचनको मुखैमा गृहमन्त्रीले राजिनामा दिँदै गर्दा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलार्इ दिने भन्ने विषयमा काँग्रेस भित्र चर्चा चलेको छ । कांग्रेस उच्च स्रोतकाअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रीबाट राजीनामा […]
संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कारका कमाण्डर महानगरका मेयरका उम्मेदवार
काठमाडौँ । २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला गोर्कीप्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दै मतदानमा सहभागी भएनन् । त्यतिबेला श्रेष्ठले आफू मात्र होइन अरूलाई समेत सहभागी नहुन भन्दै सक्रियतापूर्वक निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) तत्कालीन नेकपा–माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेसँगै उनी पनि निर्वाचनको प्रतिरोधमा उत्रिए । तिनै श्रेष्ठले ३१ वैशाखमा […]
निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको तयारीमा क्रान्तिकारी माअोवादी (कस्तो होला घोषणापत्र ?)
प्रकाशित मिति : २०७३, १९ चैत्र शनिबार April 6, 2017
काठमाडौँ । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले स्थानीय चुनावलार्इ क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । पार्टीको बैधानिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले स्थानीय चुनावमा भाग लिने छ । त्यसका लागि घोषणापत्रको तयारी भइरहेको छ । सीपी गजुरेलको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकले स्थानीय निर्वाचनलाई ‘क्रान्तिकारी उपयोग’ गर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचनको तयारी थालेको […]
सरकारले सबै गाँउपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटायो (तपार्इँको गाँउपालिकामा को ?)
प्रकाशित मिति : २०७३, ४ चैत्र शुक्रबार March 18, 2017
काठमाडौँ । सरकारले ४८१ गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खटाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अधिकृतहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयहरुमा कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काजमा खटाएको हो । मन्त्रालयले कुनै विलम्ब नगरी खटिएको ठाउँमा रमाना र्लिर हाजिर हुन सबै अधिकृतहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सरकारले गाउँपालिकामा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरिसकेको छ । […]
स्थानीय निकाय खारेज (तपार्इ कुन स्थानीय तहको कति वडामा पर्नु भयो)
प्रकाशित मिति : २०७३, २७ फाल्गुन शुक्रबार March 12, 2017
काठमाडौं । शक्रबार देखि लागु हुने गरी पुराना गाविस र नगरपालिका खारेज भएका छन् । देशभरका पुराना स्थानीय निकायहरु खारेज गर्दै सरकारले नयाँ स्थानीय तह लागु गरेको हो । पुराना स्थानीय निकायको स्थान अब नयाँ बनेका ७४४ वटा स्थानिय तहले लिने छन् । स्थानीय तहको संख्या, सीमा र केन्द्रलार्इ सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । […]
सप्तरी घटनापछि रिट्रिट भएका एमाले नेताः पहाडी बस्तीमा सेल्टर
प्रकाशित मिति : २०७३, २४ फाल्गुन मंगलवार March 8, 2017
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू मेची–महाकाली अभियानका क्रममा सोमबार सप्तरीमा भएको घटना पछि सुरक्षित स्थान लागेका छन् । एमालेले गरेको कार्यक्रम विथोल्न पुगेका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू र प्रहरीबीचको झडपका क्रममा चार जनाको ज्यान गएपछि असहज परिस्थितिका कारण एमाले नेताहरू अभियान स्थगित गरी सुरक्षित स्थान लागेका हुन् । घटनापछि एमालेको आकस्मिक स्थायी समिति बैठकले अभियान […]
प्रहरीको मोष्ट वाण्टेड सूचीका ढुंगेल बालुवाटारमा सजाय माफ गर्न प्रधानमन्त्रीलार्इ दबाब
प्रकाशित मिति : २०७३, २३ फाल्गुन सोमबार March 7, 2017
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका छन् । आइतबार बालुबाटारमा उनले प्रधानमन्त्री सहित नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन बैद्यसँग सामूहिक भेट गरी जन्मकैदको फैसला माफी मिनाहा गर्न दबाब दिएका छन् । अदालतपीडित संघको […]
के भयो बालुवाटर बैठकमा ? : के मिल्नै नसक्ने गरी सरकारसँग टाढिन लागेको हो त मोर्चा ?
प्रकाशित मिति : २०७३, ७ फाल्गुन शनिबार February 19, 2017
काठमाडौँ । पछिल्लो समय निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारीलार्इ लिएर मधेसी मोर्चा र सरकारबीच दुरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी गर्दै गर्दा मधेसी मोर्चा अान्दोलनको तयारी गर्दैछन् । यस्तोमा के मधेसी मोर्चा मिल्नै नसक्ने गरी सरकार सँग टाढिएको हो त ? प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले यस्तै संकेत पाएका छन् । उनले […]